ညက(ဓါးပြ)တိုက်သွားတာလည်းမောင်ရင်၊ ဒီအမှုကိုစစ်ဆေးတာလည်း မောင်ရင်ဆိုတော့ ဘယ်လိုပြောရမယ်ဆိုတာ နဲနဲစဉ်းစားပါရစေအုံး | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« စုံစမ်းရေးကော်မရှင် အခေါင်းတွေကို နောက်ဆုံးရိုက်သွင်းလိုက်သော သံတစ်ချောင်း
“ မြန်မာ့အကြမ်းဖက် ကမ္ဘာကိုလွှမ်း၇မည် ” »
ညက(ဓါးပြ)တိုက်သွားတာလည်းမောင်ရင်၊ ဒီအမှုကိုစစ်ဆေးတာလည်း မောင်ရင်ဆိုတော့ ဘယ်လိုပြောရမယ်ဆိုတာ နဲနဲစဉ်းစားပါရစေအုံး
တိုက်သွားတာလည်း မောင်ရင်ဒီအမှုကို စစ်ဆေးတာလည်း မောင်ရင်ဆိုတော့ နဲနဲစဉ်းစားပါရစေအုံး
(၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ မေလ ၁ ရက်)
မီဒီယာသတင်းများအရ ရန်ကုန်တိုင်းဥက္ကံမြို့တွင်သပိတ်အဖုံးကျကွဲမှုသည် ဗလီနှင့်ဆိုင်ခန်း ၂၅ ခန်းဖျက်ဆီးခြင်းခံခဲ့ရပြီး၊ လူ ၁၀ ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။ရဲက သေနတ်ပစ်ဖောက်ခဲ့ရသည်။
မည်သည့်ရှောင်တခင်ဖြစ်မှု၊မတော်တဆဖြစ်မှုမီးပွားကို ဘာသာရေးလူမျိုးရေးမုန်းတီးမှု မီးလောင်တိုက်သွတ်သွင်းရန်သူတို့အသင့်ရှိနေကြသည်။ နေရာအနှံ့အပြားတွင် သူတို့၏ “အကြမ်းဖက်ကွန်ယက်များ” ရှိနေသည်၊ဖွဲ့စည်းထားသည်မှာ ယုံမှားသံသယဖြစ်ဖွယ်မရှိတော့ချေ။
“အကြမ်းဖက်သူများ”သည် စည်းကမ်းပြည့်ဝသောဒီမိုကရေစီဘောင်ထဲတွင်“စည်းကမ်းရှိသည်”။ စနစ်ကျသည်။ စစ်တပ် သဖွယ်အမိန့်နာခံမှုကောင်းလှသည်။
“ဖျက်ဟေ့၊ ဆီးဟေ့၊ သတ်ဟေ့၊ဖြတ်ဟေ့၊ ရိုက်နှက်မီးရှိုဟေ့ဟု အမိန့်ပေး” လိုက်သည့်အခါ တောခွေးအုပ်များကဲ့သို့ အတွဲအဖက်ညီညာသည် ခြေထောက်ဆွဲသူကဆွဲ၊ ဂုတ်ခဲသူကခဲ။
“ရပ်ကြဟေ့” ဟု အမိန့်ပေးခရာမှုတ်လိုက်သည့်အခါထိုအကြမ်းဖက်သမား လူရမ်းကားများသည် တောခွေးအုပ်များ တောထဲသို့ဝင် ရောက်ပျောက်ကွယ်သွားသလိုကိုယ်ယောင်ဖျောက်သွားကြသည်။ ငြိမ်သက်သွားကြသည်။ ဤလုပ်ရပ်မျိုးကို မိထ္ထီလာ၊ ကြို့ပင်ကောက်စသောနေရာများတွင် လက်တွေ့ တွေ့မြင်ခဲ့ကြသည်။
သူတို့တွင် စနစ်တကျအမိန့်ပေးနေသည့်“အကြမ်းဖက်လက်မရွံ့ဌာနချုပ်”တစ်ခုရှိနေတာသေချာသည်။ မူဆလင်ဘာသာဝင် လူနည်းစုများကိုအဓိကပစ်မှတ်ထား အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်နေသည်မှာလည်းထင်ရှားပါသည်။ ယင်းသို့ အကြမ်းဖက်ရန်ပြုမှုကို သက်ဆိုင်ရာဒေသလုံခြုံရေးတာဝန်ယူထားသည့်ရဲများကမည်သို့မျှတားဆီးခြင်းမရှိဘဲ၊ လက်ပိုက်ကြည့်နေခဲ့သည်မှာလည်း တိုင်းသိပြည်သိ ဖြစ်သည်။
ဤဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရပ်များကိုတွေ့မြင်ရသောအခါ ရန်ကုန်မြို့ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းမကြီးပေါ်တွင်စကားပြောစက်ကိုင် “ကြံ့ဖွံ့စွမ်းအားရှင်” လူရမ်းကားအုပ်စုများ၏ အကြမ်းဖက်မှုကိုခံခဲ့ရဖူးသောဒီချုပ်ခေါင်းဆောင်များ၏ဖြစ်ရပ်နှင့်စစ်ကိုင်းတိုင်းအတွင်း မေလ၃၀ ရက်၊ “ဒီပဲယင်းအကြမ်းဖက်သတ်ဖြတ်မှု”နှင့်တစ်ထပ်တည်းနီးပါးတူညီနေသည်ကို သတိပြုမိပါသည်။ ပစ်မှတ်ခြင်းသာ ကွာခြားပါသည်။ဟိုစဉ်က ပစ်မှတ်မှာ ဒီချုပ်ပါတီခေါင်းဆောင်များနှင့်ပါတီဝင်များကို ရိုက်နှက်သတ်ဖြတ်၊ရန်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ယခုပစ်မှတ်မှာ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် မူဆလင်များအပေါ် ပစ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်ပဋိပက္ခများ၏အစမီးပွားဖြစ်သော ကျောက်နီမော်ဖြစ်စဉ်မှ မုဒိန်းကျင့်/လူသတ်မှုကျူးလွန်သူများကို ရက်ပိုင်းအတွင်း စစ်ဆေး၍သေဒဏ်ပေးခဲ့သော်လည်း တောင်ကုတ်တွင် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်၊ မူဆလင် ၁၀ ဦးအားအကြမ်းဖက်လူရမ်းကားများက အုပ်စုဖွဲ့သတ်ဖြတ်ခဲ့သောအမှု (ဗိုလ်)ဦးသိန်းစိန် ကြံ့ဖွံ့အစိုးရသည်ထိရောက်သောအရေးယူဆောင်ရွက်မှုမပြုခဲ့ချေ။ လစ်လျူရှုနေခဲ့သည်။ အစိုးရသတင်းစာကပင် ထိုးဆွမြှောက်ပင့်ရေးသားခဲ့သည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်ဖြစ်စဉ်၊ မိထ္ထီလာဖြစ်စဉ်၊ကြို့ပင်ကောက်ဖြစ်စဉ်များတွင် ကြမ်းခဲ့ရမ်းခဲ့သူများကို ဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးခြင်း အပြစ်ပေးအရေးယူခြင်းများကို ထိထိရောက်ရောက်လုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိဘဲ။ တမင်အချိန်ဆွဲထားသည်။ မိထ္ထီဖြစ်စဉ်၏အစမီးပွားဖြစ်သော ရွှေအရောင်းအဝယ်ပဋိပက္ခတွင် ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ ၃ ဦးကို ထောင်ဒဏ် ၁၄နှစ်စီ အပြစ်ဒဏ်ပေးခဲ့သည်။
ဤသည်တို့မှာ တစ်ဖက်လှည့်ဖြင့် အားပေးအားမြှောက်ပြုခြင်းပင်ဖြစ်သည်။မင်းတို့နောက်မှာ ငါတို့ရှိတယ် ကြမ်းကြစမ်း၊ ရမ်းကြစမ်း၊ သတ်ကြစမ်း၊ ဆိုသည့်အဓိပ္ပါယ်ပင်။“၂၀၁၅”တွင် မီးကုန် ယမ်းကုန်ကြမ်းနိုင်ရန်အတွက် မိုက်သွေးစမ်းနေခြင်း၊ မိုက်သွေးတင်ပေးနေခြင်းဖြစ်သည်ဟုလည်း ယူဆနိုင်ပါသည်။
ဤအကြမ်းဖက်မှုများ၏နောက်ကွယ်တွင်အစိုးရ တနည်းနည်းဖြင့်ပါဝင်ပတ်သက်နေသည်။သို့အတွက် တရားခံကိုဖော်ထုတ်ဖို့ ခက်နေခြင်းဖြစ်သည်။သို့အတွက် စစ်အုပ်စုအမွှေးရှည်အရိုးရင့် (ဗိုလ်)အောင်သောင်းက“ဗကပယူဂျီတွေ”ဆိုပြီး ထမင်းရည်ပူလာလျှာလွှဲနေခြင်းဖြစ်သည်။
ဒီပဲယင်းအကြမ်းဖက်မှုကို ထောက်လှမ်းရေးနဲ့ဗိုလ်ခင်ညွန့်က “သူတို့ဖန်တီးခြင်းမဟုတ်၊ သူတို့မသိ၊ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို သူတို့ကယ်ထုတ်ခဲ့ရတာပါ” ဆိုသည့်အကွက်မျိုး (ဗိုလ်) ဦးသိန်းစိန်ကြံ့ဖွံ့အစိုးရကချိုးနေခြင်းဖြစ်သည်။
မြန်မာပြည်အနှံ့အပြားတွင် လူမျိုးရေးဘာသာရေးပဋိပက္ခများဖြစ်ပွားဖွယ်ရာ အလားအလာရှိမြဲရှိနေပါသည်။ အထူးသဖြင့် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်၊ မူဆလင်များထူထူထပ်ထပ်ရှိသောဒေသနှင့် မြို့ရွာကျေးလက်များတွင် ပို၍သတိရှိကြရပါလိမ့်မည်။တဆိတ်တအိတ်လုပ်၍ လူသတ်မီးရှို့အကြမ်းဖက်မှုများ ကျူးလွန်ကြပါလိမ့်မည်။
တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုသည့်စကားနှင့်(ဗိုလ်)ဦးသိန်းစိန်ကြံ့ဖွံအစိုးရ၏ အကြမ်းဖက်မှုများစုံစမ်းစစ်ဆေး၊ အရေးယူနေပါသည် ဆိုသည့်ကိစ္စများကလည်းနာမည်ကျော်ကာတွန်းဆရာကြီးဦးဘဂျမ်း၏ ကာတွန်းလက်ရာတစ်ခုထဲမှာပြောထားသကဲ့သို့ပင် ပြောရပါတော့မည်။“ဟုတ်ကဲ့မောင်ရယ်ပြောပါ့မယ်ညက(ဓါးပြ)တိုက်သွားတာလည်းမောင်ရင်၊ ဒီအမှုကိုစစ်ဆေးတာလည်း မောင်ရင်ဆိုတော့ ဘယ်လိုပြောရမယ်ဆိုတာ နဲနဲစဉ်းစားပါရစေအုံး”
This entry was posted on May 2, 2013 at 4:42 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.